Exclusive: सज्जा चौलागाईंले जितिन् ५० लाख बनिन् ! नेपाल आइडलमै भेटियो कोरोना…(हेर्नुहोस् भिडियो) «
Exclusive: सज्जा चौलागाईंले जितिन् ५० लाख बनिन् ! नेपाल आइडलमै भेटियो कोरोना…(हेर्नुहोस् भिडियो)
Published : 28 August, 2020 10:29 pm
देशले आज तेस्रो नेपाल आइडल प्राप्त गरेको छ । आज शुक्रबार स्टुडियोमा आयोजना भएको गायन रियालिलिटी सो ‘नेपाल आइडल-३’ को ग्रान्ड फिनालेमा बाट विजेता घोषणा गरिएको छ । विभिन्न इलिमिनेसन राउन्ड पार गर्दै उत्कृष्ट ३ मा पुगेकामध्येबाट तेस्रो नेपाल आइडल घोषणा भएको हो । एपी वान एचडीबाट हरेक हप्ता बिहीबार र शुक्रबार प्रसारण हुँदै आएको यो रियालिटी सो नेपाली सांगीतिक इतिहासको सर्वाधिक रुचाइएको कार्यक्रम हो। प्रतिस्पर्धाको उत्कृष्ट ३ मा सज्जा चौलागाईं, प्रवीण बेडुवाल र किरणकुमार भुजेल आएका थिए । हजारौंबाट छानिएर उत्कृष्ट ३ मा पर्न सफल भएका उनीहरूले पाएको भोटको आधारमा विजेता चयन भएको हो । विजेताले ‘नेपाल आइडल-३ को उपाधिसहित ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी फस्ट रनरअपले १५ लाख र सेकेन्ड रनरअपले पाँच लाख नगद प्राप्त गरेका छन् । कार्यक्रमको निर्णायक मण्डलमा इन्दिरा जोशी, न्ह्यु वज्राचार्य र कालीप्रसाद बाँस्कोटा रहेका छन्।
रियालिटी सो तेस्रो नेपाल आइडलमा सर्वाधिक भोट ल्याएको आधारमा मोरङ पथरीकी सज्जा चौलागार्इं विजयी भएकि छिन् । उहाँलाई धेरै-धेरै बधाई
बिजेता सज्जा चौलागाईं को हुन् त ?
गायक प्रदिप कार्की र गायिका बेनिशा पौडेलको स्वरमा समावेश ‘सुनै सुनको तिलहरी’ बोलको गीतको भिडियो